चीन टायर लेबल, टायर लेबल थोक - क्रिस्टल कोड प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड
ईन्जिनियरिङ् निर्माणको ठूलो प्रगति र पारिवारिक कारहरुको ठुलो मांग संग, ओटोमोबाइल उद्योग 21 औं केन्द्र मा तेजी देखि बढ जान्छ। ओटोमोबाइलको एक कम्युनिष्ट भागको रूपमा, टायर उद्योगबाट यो लाभ।
क्रिस्टल कोडले निम्न गुणस्तर टायर विशेष उपयोग योग्यताहरू प्रदान गर्दछ टायर लेबल जसले निम्न विशेषताहरू छन्:
1. अनुहारको सामग्री: विस्तृत छविहरू बाहेक अनुहार राम्रो असामान्यता हुनुपर्छ। हामी पर्यावरण अनुकूल पीपी सामग्रीको सिफारिश गर्छौं।
2. टाँसन वाला: कुनै टाढा सतहहरु आक्रामक तत्काल आसंजन को आवश्यकता हो।
3. लिनर: उच्च कोट वजन टाँस्ने जस्ताले म्यानमा काटेर धेरै चुनौतीहरू ल्याउँछ, त्यसैले लाइनर सीधा, सुचारू हुनु पर्छ र यसको तनाव धेरै ठिकै हुनुपर्छ।
क्रिस्टल कोड यस क्षेत्र मा प्रचुर मात्रा मा अनुभव र विस्तृत श्रेणी को उत्पादनहरु र स्थिर राम्रो गुणवत्ता टायर लेबल संग।
टायर लेबल मोटर वाहन टायरको लागि एक चिन्ह हो। कारहरू, हल्का र भारी ट्रकका लागि टायरहरूको निर्माताले ईयू बजारमा बेचेको प्रत्येक टायरको ईन्धन खपत, गीली ग्रिड र शोर वर्गीकरणको वर्णन गर्नुपर्दछ नोभेम्बर 2012 मा।
यात्री कारको लागि, हल्का ट्रक र ट्रक टायर जानकारी निर्माता वेबसाइटमा टेक्नोलोजी प्रोमोशनल साहित्य (पत्रपत्रिका, ब्रोशर, आदि) मा उपलब्ध हुनुपर्दछ। यात्रु र हल्का ट्रक टायरका लागी निर्माताहरू वा आयातकर्ताहरूसँग टाँसेको ट्रकमा वा स्टिकर राख्नुको विकल्प छ वा लेबलले टायरको ब्याचको डिलर र अन्तिम उपभोक्तालाई प्रत्येक वितरणको साथ। टायर लेबलले खराब प्रदर्शन (रेड श्रेणी "जी") लाई उत्तम (हरियो श्रेणी "ए") बाट वर्गीकरणको प्रयोग गर्नेछ।